Ihowuliseyili Sodium Gluconate mveliso kunye nabenzi | Gaoqiang
Isodium Gluconate ekwabizwa ngokuba yi-D-Gluconic Acid, ityuwa yeMonosodium yityuwa yesodiyam ye-gluconic acid kwaye iveliswa kukuvundiswa kweswekile. Yimbudumbudu emhlophe, ikristale eyomeleleyo / umgubo onyibilikayo emanzini.
Isodium Gluconate ekwabizwa ngokuba yi-D-Gluconic Acid, ityuwa yeMonosodium yityuwa yesodiyam ye-gluconic acid kwaye iveliswa kukuvundiswa kweswekile. Yimbudumbudu emhlophe, ikristale eyomeleleyo / umgubo onyibilikayo emanzini. Ayonakalisi, ayinetyhefu, inokuboliswa ziintsholongwane kwaye iyahlaziywa.Yamelana ne-oxidation kunye nokuncitshiswa nakumaqondo aphezulu obushushu. Eyona ndawo iphambili ye-sodium gluconate ngamandla ayo okukhohlisa, ngakumbi kwi-alkaline kunye nezisombululo zealkaline ezixineneyo. Yenza i-chelates ezinzileyo kunye ne-calcium, isinyithi, ubhedu, i-aluminium kunye nezinye izinyithi ezinzima. Yeyona arhente iphambili yokukhohlisa kune-EDTA, i-NTA kunye neephosphonates.
Amhlophe amasuntswana amhlophe / umgubo
1. Ishishini lokutya: I-Sodium gluconate isebenza njenge-stabilizer, i-sequestrant kunye ne-thickener xa isetyenziswa njengesongezo sokutya.
2. Umzi mveliso wezoMayeza: Kwicandelo lezonyango, linokugcina ibhalansi yeasidi kunye nealkali emzimbeni womntu, kwaye libuyise ukusebenza kwesiqhelo kwemithambo-luvo. Ingasetyenziselwa ukuthintela nokunyanga isifo seswekile ephantsi.
3. Izinto zokuthambisa kunye neemveliso zoKhathalelo lobuqu: Isodium gluconate isetyenziswa njenge-arhente yokukhohlisa ukwenza izakhiwo ezine-ion zentsimbi ezinokuba nefuthe kuzinzo nembonakalo yeemveliso zokuthambisa. Iigluconates ziyongezwa kubahlambululi kunye neeshampu zokunyusa i-lather ngokucoca i-ion zamanzi ezinzima. Iigluconates zikwasetyenziswa kwimveliso yokhathalelo lomlomo kunye namazinyo njengentlama yamazinyo apho isetyenziselwa ukucoca i-calcium kwaye inceda ukuthintela i-gingivitis.
Icandelo lokuCoca: i-Sodium gluconate isetyenziswa ngokubanzi kwizinto ezininzi zokuhlamba iimpahla, ezinje ngesitya, impahla, njl.
Iphakheji:Iiplastiki ezingama-25kg ezine-liner ye-PP. Enye iphakheji inokufumaneka xa uceliwe.
Ukugcina:Ixesha lokugcina ubomi li-2 iminyaka ukuba igcinwe kwindawo epholileyo neyomileyo. Uvavanyo kufuneka lwenziwe emva kokuphela kwexesha.
Egqithileyo Kwiselulosi kaEtere HPMC for Ukutyabeka / eziphathekayo / Grout njengoko Agent Water-Ukugcina
Okulandelayo: IPolycarboxylate Ether Monomer HPEG / TPEG
Ummeli weSodium Gluconate Chelating
Ukuhlanganiswa kweKhonkrithi yeSodium
Isodium Gluconate Ekutyeni
Isodium Gluconate Kwisepha